Ukuqonda i-R kwiCRM | Martech Zone
NgoMvulo, nge-28 kaJanuwari, 2008 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ndifunda nje iposti elungileyo CRM kwaye ndicinga ukuba inye enkulu, enkulu, evulekileyo yomngxunya kulwenziwo lweCRM… ulwalamano.
Ulwalamano ifuna a indlela ezimbini zonxibelelwano, Into edla ngokungabikho kwiCRM. Zonke ii-CRM eziphambili kwimarike zenza umsebenzi omangalisayo wokufakwa kwedatha engenayo- kodwa akukho nto bayenzayo ukugqibezela iluphu. Ndiyakholelwa ukuba esi sisitshixo sokuba kutheni ukuphunyezwa kweCRM kusilele. Kwaye ndiyakholelwa ukuba lelona khonkco libuthathaka kuninzi lwamaqonga eCRM.
Jonga kuGoogle ukukhangela Ulawulo oludibene nabathengi Kwaye uyakufumanisa ukuba umthengisi ngamnye uchaza iCRM ngokungqongqo ngokubhekisele kumandla esoftware yabo. Umzekelo, nantsi Ingcaciso yeNtengiso:
Eyona nkcazo ilula, ebanzi inokufumaneka kwigama: I-CRM yindlela ebanzi yokulawula ubudlelwane nabathengi bakho? kubandakanya abathengi abanokubakho? isibonelelo esihlala ixesha elide kunye nesiqhelo. Ngokukodwa, iinkqubo zeCRM zale mihla zikwenza ukuba ubambe ulwazi olujikeleze unxibelelwano lwabathengi kwaye udibanise nayo yonke imisebenzi enxulumene nomthengi kunye nenqaku ledatha.
Hmmm… ndicinga ukuba ayenzeki ngokungangqinelaniyo ukuba iqonga leSalesforce lijolise ngokupheleleyo ekubanjweni kwedatha kwaye isiphelo sangasemva sinamandla okudityaniswa okumandla. Ndicinga ukuba sisiqingatha nje sesisombululo seCRM.
Esinye isiqingatha sesisombululo sixhomekeke kwindlela onxibelelana ngayo nomthengi wakho. I-CRM yakho kufuneka ijolise kumanqaku okuqala ukuze uqikelele, ngokusemandleni akho, amaxesha apho kuya kufuneka wenze kubudlelwane bakho nomthengi wakho. Ubaqhubela phambili njani abathengi bakho ngokusebenzisa umjikelo wobomi wabathengi?
Imizekelo yokuSebenza koncedo lweCRM
Ukuba lithemba, zeziphi iimveliso okanye iinkonzo ezinomdla kuzo kunxibelelwano lwakho okanye kwiwebhusayithi yakho (ukudityaniswa kwe-analytics)? Balindele nini ukuba uza kudibana nabo kwakhona? Ngaba unezilumkiso ezisetiweyo zokukwazisa xa unxibelelana nabo okanye ii-imeyile ezingumxholo?
Ukuba lithemba okanye umthengi, ngaba umxholo wakho wewebhusayithi ubonelela ngamandla kwiimveliso okanye iinkonzo abanike umdla kuzo okanye uzithengisile? Ndiyacinga Amazon.com wenza umsebenzi omkhulu ekuphakamiseni iincwadi kum - kodwa abayikhathaleli inyani yokuba ndithengela kuyo Barnes noNoble, kananjalo. Ukuba zidityanisiwe Ishelfari or Kulungile kwiakhawunti yam, bayakwazi endikuthengileyo kwaye ngekhe baphinde bandibonise.
Ngaba umisele ixabiso kumthengi wakho onokuthi emva koko usebenze ngalo? Ukuba ndichitha amawaka eedola kunye nawe, undiphatha njani ngokwahlukileyo kunabangenayo? Ndiya kwivenkile enkulu yekofu ekuhlaleni endikhalela ixesha elincinci xa ndifumana iphakathi. Bayandazi ngegama kwaye bayazi ukuba ndibaluleke kakhulu kubo ngaphezu komthengi obonisa kanye ngenyanga.
Ngaba sele uqaphele ukuba i-trigger yeyokuba abantu bahlale okanye bakushiye? Ukuba umfundi ophakathi weleta yakho ye-imeyile uvula i-5, ungaze ucofe, emva koko ungabhalisi, wenza ntoni ngokwahlukileyo kwiphepha leendaba elingu-5 lomfundi ongazange acofe?
Ugqibele nini ukubabulela okanye ucele ingxelo ngenkonzo yakho? Ngaba unayo inkcitho okanye umda womsebenzi osetelwe ukunxibelelana nabathengi abachitha i-X okanye bathenga yonke i-X yeentsuku, iiveki okanye iinyanga?
Ukucwangciswa, ii-imeyile, ii-imeyile, imivuzo kunye nomxholo onamandla zizinto eziphambili KUWE zigcina ubudlelwane kunye nomthengi wakho kunye nokubanceda ngokuhamba kobomi kubathengi Jonga isicelo sakho seCRM kwakhona… sikunceda njani ukwenza loo nto? Akufanele ishiyelwe kuwe ukuba uphuhlise konke oku kunxibelelana neCRM yakho. Ukuba kunjalo, awunayo inkqubo yeCRM, unedathabheyisi yabathengi.
Uhlalutyo, iinqwelo zokuthenga, ukuthengisa nge-imeyile kunye neenkqubo zokuLawulwa kweMixholo yeWebhusayithi kufuneka zonke zidityaniswe ukuze ube nokuphunyezwa kweCRM eya kuthi izuze ngokupheleleyo kwiindleko zokuqala kunye nomzamo ofunekayo ekwakheni ukumiliselwa kweCRM. Ukuba awunayo dibanisa amachaphaza, Awunaso isisombululo seCRM.
QAPHELA: Xa ndenza uphando ngezixhobo zeCRM kunye nomzobo olungileyo kwiwebhu, ndafumana isibonelelo esikhulu, Utitshala oThengisayo.
tags: CRMubudlelwane bamakhasimendeulawulo oludibene nabathengilungiselelaukuhlolwa kwemvelisoukufumana izikhokeloulwalamanodesign ezwayoinkqubo yokuthengisamarbles
IMedia Media ukuya kwiiNethiwekhi zeNtlalontle yoLuntu = UKUPHUMELA
Ndicinga ngokunyanisekileyo ukuba uninzi lweenkqubo zeCRM kufuneka zibizwe ngcono ngokuba ziinkqubo zePRM kuba azikho malunga noLawulo loBudlelwane baBaxumi kodwa ke malunga neProspect Relationship Management ingakumbi apho singenayo inkxalabo ngolwalamano oluqhubekayo naye nabani na. Uninzi lwezi nkqubo lwenzelwe abazingeli ngokuchaseneyo nabaqokeleli kwaye alufanelekanga kwaphela kwisicwangciso 'somhlaba nokwandisa' esifuna ukwakhiwa kobudlelwane obuhlala ixesha elide.
Iinkqubo zeCRM zenzelwe ukuphatha inani elikhulu “labathengi” kunye nokwakha ubudlelwane bunokwenziwa kuphela xa sijonga iinzame ezigxininisiweyo kumanani amancinci abathengi.
Unyanisile kwaye isizathu kukuba ezi nkqubo zeCRM zazingakhelwanga iinjongo ezisetyenziselwa zona.
Jan 29, 2008 kwi-3: 46 AM
Mhlawumbi ungachaneka ngakumbi xa ubabiza “Iinkqubo zoLawulo lweThemba", Okanye"PMS”Ngamafutshane. U-Kinda unesangqa esothusayo kuyo, hayi? '-)
Jan 29, 2008 kwi-6: 40 AM
Utshilo, hayi mna
Jan 29, 2008 kwi-3: 31 AM
Amanqaku amahle. Ngeendlela ezininzi ezilula kwiinkampani ukuba ziqale ukusebenzisana nabathengi kwinqanaba elinye, akufuneki kubekho sizathu sokwenza njalo (facebook, iibhloko, i-imeyile).
Yonke inkampani isebenzisa iCRM, ukuyisebenzisa ngokukuko kunokuba sisindululo sexabiso esibonelelwa yinkampani yakho, kwaye konke oko kukwiingcebiso zomnwe wakho.
Njengokuba ndibhlogile malunga nokubuyela umva, baninzi kakhulu abasebenzisa iCRM 'ukulandela' amathemba abo kunokuba benze ubudlelwane kunye nabo.
Jan 30, 2008 kwi-10: 31 AM
Ngaba ezi ngcali zeCRM azikhumbuli ukuba kwakunjani xa babethandana?
Ngaba ayingombono uphela osisiseko sokwakha ubudlelwane obuhlala ixesha elide? Ke, ukulandela umkhondo kuye kwabangela ukuba ubudlelwane bube nini? Ndisabela njani kwiinkampani ezibonisa ukuba zingakanani 'ezaziyo' ngam? Ngokuchanekileyo, bhabhayi.
Sithini isisombululo? Ndibuze, ndibandakanye, ndinomdla kwaye undenze umdla, ndothuse kwaye undenze ndizive ndikhethekile. Wow, kwakunzima.
Kwenzeka njani ukuba iinkampani zingayifumani? Ngaba bayoyika ukubuza? Ukoyika ukwaliwa?
Ukutya okucinga: ukuba andinamdla, ngekhe ufune ukufumanisa kwakamsinya kunakwelinye ixesha? Ke ungagxila kwabo banomdla?